म, संजिव अनि बाल्यकाल – निरज's BLOG
संजिव ओइ संजिव । छिटो गर्न ।
हजुर आमालाई toilet आइसक्यो रे क्या …..
एक घण्टा भईसक्यो , के गरेर बस्छ यो ?
बिहान बिहानै माइजु कराउदै हुनुह्नुथ्यो ।
मलाई पनि अचम्म लाग्थ्यो । यति सानो उमेरमा नै पाएल्स भयो कि क्या हो केटोलाई ? – मनमनै सोचे ।
पछि पो थाहा भो । भित्र बसेर केटो त मज्जाले mobile मा गेम पो खेलेर बस्दो रहेछ ।
अनि किन नलगाओस त एक घण्टा !
यो mobile ले पनि हिजो आजका केटा केटीहरुलाई बिगारी सक्यो । यसको सहि utilize नभएर कत्तिको बानी नै खराब बसी सक्यो । जति खेर पनि हातमा mobile । किताब कापी त मुस्किलले देख्न पाईन्छ ।
संजिव – मामाको छोरो । कान्छो ।
बोल्न भने पछि कसैले सिकाउनु पर्दैन ।अनि जब पढ्न भन्नु पर्छ – नेपाली पनि कनी कनी पढ्छ । यसलाई नेपाली भने कि किन गारो भएको होला ?
आज शनिबार । त्यसैले केटो खुसी छ। साथीहरु संग खेल्न जो पाईन्छ । खाना खाएर केटो त कति खेर खेल्न टाप कसी हालेछ । पर तीन चार जना मिलेर गुच्चा खेल्दै रहेछ ।
फुच्चे, राजु- मेरा साथी । बच्चामा गुच्चा खेल्ने साथी । अहिले कता छ, के गर्दै छ, केहि थाहा छैन। भेट नभएको पनि लगबग १५ वर्ष हुन लागिसक्यो । सायद बाटोमा भेटियो भने पनि चिन्न गाह्रो ।
होग्य्रांग , बिच्चुली – मेरो favorite । गोजी भरी गुच्चा हुने को त सानै अर्कै। मैले पनि गोजी भरी गुच्चा लिएर छ्यांग छ्यांग गर्दै केटाहरुको अगाडी धेरै सान देखाएको अहिले जस्तो लाग्छ ।
कहिले काही यस्तो पनि हुन्थ्यो कि गोजी भरी गुच्चा लिएर गयो , घर फर्किदा रित्तै त कहिले एउटा गुच्चा लिएर गयो घर फर्किदा गोजी भरी। गुच्चा खेल्नलाई पनि दिमाग र कला चाही चाहिन्छ ।
एक रुपैयाको चार ओटा गुच्चा । पछि भाउ बढेर एक रुपैयाको त दुइ ओटा मात्र।अहिले त एक रुपैयाको एउटा ।
खेम मेरो school को साथी । संगै गुच्चा खेल्दै थियौ – बिच्चुली ।
ताकेर हानेको, बिच्चुली नै उडेर एउटा मान्छेको खुट्टामा गएर लाग्यो । मान्छे को अनुहार नहेरी गुच्चा लिन गएको त ,
पछि पो थाहा भो मान्छे हैन school को प्रिन्सिपल पो ।
कान समाती हाल्नु भो । खेम कता छ भनेर हेरेको त , केटो त अघि नै side लागि सके छ।
दरो गाली खाईयो । भोलि पल्ट त school जानलाई पनि डर लाग्यो ………..।
तपाइको छोराले मेरो साइकल बिगारेछ । एकछिन आउनु पर्यो । भर्खरको जस्तो देखिने केटोले माइजुलाई कुरा लगाउदै थियो । तेस पछि त माइजु सुरु भईहाल्नु भो छोरालाई गाली गर्न । हुन पनि यो संजिवलाई जति भने पनि नलाग्ने ।
आमाले जहिले साइकल नखेल भने पनि कहिले टेरेन ।
”जे गर्नु छ गर्नुस यो केटो लाई । म यो साइकलको खर्च दिन्न ” ( माइजु रिसाउदै)
श्रीराम र म – शनिबार भए कि पाच पाच रुपैया जम्मा गर्यो अनि गयो साइकल खेल्न भाडामा ।
कुमारी गालको साइकल पसल मा ।
पाच रुपैयाको आधा घण्टा अनि दस रुपैयाको एक घण्टा ।
कहिले काही त हामी सुन्दरीजलसम्म पनि पुगेर आयौ ।
एक दिन साइकल पसल दाई मलाई खोज्दै मेरो घरसम्म आइपुगे छ ।
मेरो साथीले साइकल लगेर फिर्ता गरेन रे ।
कसले चाही लगेछ । एकछिन त अल्लमल्ल परे । जाने त श्रीराम र म मात्र हो ।
श्रीराम ले त तेसो गर्न नपर्ने -मनमनै सोचे ।
श्रीराम को घरमा लगेर गए । पछि श्रीरामले भने पछि पो थाहा पो यो त अभिषेकको काम पो रहेछ । अभिषेक र उसको दाईले साइकल भाडामा लगेर घर पो लगेछ । हाम्रो मात्र नाम खराब ……………….।
संजिव mobile खेल्दै थियो ।
यसो हेरेको – clash of clan । five क्लासमा पढ्ने फुच्चे, clash of clan तेइ पनि level ७ ।
नेपाली को एउटा शब्द भन्न भन्दा कनी कनी भन्ने फुच्चे ।
अहिलेका बच्चाहरु technology मा कति अगाडी । mobile , laptop हामीलाई भन्दा उनीहरुलाई सबै थाहा छ ।
Mobile त मैले SLC पास गरे पछि मात्र चलाउन पाए । तेइ पनि स्क्रीन touch होर ?
नोकिया ३२०० , त्यो बेलाको हीरो , अहिले पो जीरो ।
झन् laptop त bachelor पढदा ।अहिले त school जाने ८,९ संग पनि Mobile , laptop ।
अहिलेका बच्चाहरु lucky नै मान्नु पर्छ ।
हाम्रो पालामा यस्तो Mobile मा क्यामेरा कहाँ थियो र ।
kodak को कालो क्यामेरा , रिल हाल्यो, खिच्यो अनि धुलाउन दियो ।
फोटो एक दिन पछि मात्र ।
फेरी हाम्रो बेलामा hi5 , hotmail , yahoo को चलन थियो । yahoo मा account खोल्नेको धाक नै अर्को । cyber गएर आएको भने पछि त फुर्ति नै बेग्लै । यो facebook को जन्म नै भएको थिएन ।
अहिले पो सेल्फी लियो अनि facebook मा पोस्ट गरेकी २००, ३०० likes ।
आफ्नो भने ५० likes पनि मुस्किलले ।
Author Niraj Thapa MagarPosted on January 25, 2017 Categories MomentsTags amomenttoremember, blogging, Childhoodmemories, children
Next Next post: When I wereakid !!!!!!!